Khidmadaha Cusub ee Dpworld & Dalladda Ganacsatadda (Chamber of Commerce) Fadhiidnimada Xukuumada & Ascaarta Maceeshadda oo la filayo inay korrodho
Sunday December 26, 2021 - 17:04:42 in Wararka by Waaberi News
Waxaynu halkan ku wadaagnay 15-kii bishan in khidmaddaha dekeda Berbera ay DPWorld ka qaadayso adeegyada ay qabato ay kordhiysay. Korodhkaas oo bilaabmaya bisha 1aad ee sanadka 2022 ama 5 maalmood kadib
Koontaynaradda 20ft iyo 40ft ayaa ka hore ay ku kordheen $117, ka dambana $190. Korodhkan ayaa imanaya xili maceeshadda iyo quutal daruurigu cirka isku shareeray iyadoo la filayo in talaabaddana ay uga sii darto ascaarta taas oo cidhiidhi gelin doonta nolosha dadka reer Somaliland. Waxaa sidoo kale soo waajahaya boqolaal kun oo caruur iyo haween ah gaajo iyo nafaqo darro. Xaaladda deganaanshaha dalka ayaa iyaduna halis geli karta.
Dalladda Ganacsata iyo Warshaddaha Dalka (Chamber of Commerce) ayaa qoraalkan hoose u diray Wasaaradda Ganacsiga & Dalxiiska oo kaalin-gab noqotay. Ilaa iyo haddana ogaalkay wax jawaab ah may helin Ganacsatadu iyadoo maalmo kooban ay ka hadhsan yihiin dhaqan-galka khidmadaha cusub ee ay DPWorld soo rogtay.
Fadhiidnimada Xukuumadda talada haysa guud ahaan , gaar ahaan Wasiirka Ganacsiga & Dalxiiska looga bartay iyo xaaladdan faro-ka-baxa ah waxaa la filan karaa January 2022, saddex arimood midkood:
1. In dhegaha ay xukuumada sidaa uga furaysato, ganansataduna aqbasho khidmadaha cusub iyagoo ku kordhinaya maceeshada qiimayaasha.
2. In Ganacsataddu diido khidmadahan cusub, DpWorldna ku adkaysato kadibna shaqadda dekeddu istaagto
3. In waqtiga yar ee kooban ee hadhay ay Xukuumadda soo faro-galiso lagana gaadho is fahan nuxurkiisu yahay in waqti xaadirkan aanay suurtagal ahayn in khidmadaha adeegyaddan la kordhiyo.
Xamse C. Khayre
Xoghayaha Ganacsiga, Warshadaha & Dalxiiska
Xisbiga Rejadda Shacabka -Waddani.